သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ နေပြည်တော်-တပ်ကုန်း အမှတ်(၁) လမ်းမကြီးဘေး ဖိုးဇောင်းတောင်ကြိုးဝိုင်းအတွင်း သစ်တောလုပ်ငန်းများ၊ နေပြည်တော် -ကံပြားလမ်း ငလိုက်ကြိုးဝိုင်းအတွင်း ဆောင်ရွက်ထားသော သစ်တောလုပ်ငန်းများနှင့် မြန်မာ့ သစ်လုပ်ငန်း၊ ငလိုက်ဆင်စခန်းတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေး သည်။
ရှေးဦးစွာ နေပြည်တော်-တပ်ကုန်း အမှတ်(၁)လမ်းမ ကြီးဘေး ဖိုးဇောင်းတောင်ကြိုးဝိုင်းတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မိုးရာသီတွင် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအတွက် စိုက်ပျိုးမည့် စိုက်ခင်းမြေနေရာ ပြုပြင်ထားရှိမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes မှ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၁:၀၀) နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေသံ အမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes နှင့် နော်ဝေနိုင်ငံသံရုံးမှ Development Counsellor ဖြစ်သူ Mr. Vegard Pedersen တို့အား Video Conferencing စနစ်ဖြင့် လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်သူ့အတွက် စတုတ္ထ(၁)နှစ်တာ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ
ပြည်သူ့အတွက် စတုတ္ထ (၁) နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
သစ်စေ့မြေလုံးများ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြသည့်အခမ်းအနား ကျင်းပ
သစ်ပင်ပေါက်ရောက်မှုနည်းပါးသည့် တောင်တန်း၊ တောင်ကုန်းများတွင် သစ်စေ့မြေလုံး (Seed Ball)များ ကြဲချ/စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ သစ်တော ဦးစီးဌာန အင်ကြင်းခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူး (Project Coordinator) (၁) ဦးနှင့် စီမံကိန်းလက်ထောက်ညှိနှိုင်းရေးမှူး (Project Assistant Coordinator) (၁) ဦး ခေါ်ယူခန့်ထားရန်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မီနာမားတား ကနဦးဆန်းစစ်ချက်နှင့် အသေးစားနှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ရွှေသတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် အမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ” (Development of Minamata Initial Assessment and National Action Plan for Artisanal and Small Scale Gold Mining in Myanmar)” စီမံကိန်းတွင် စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူး (Project Coordinator) (၁) ဦးနှင့် စီမံကိန်းလက်ထောက်ညှိနှိုင်းရေးမှူး (Project Assistant Coordinator) (၁) ဦး ခေါ်ယူခန့်ထားရန်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ ကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် Digital Campaign တစ်ရပ်အား “ တို့ကမ္ဘာမြေ ရေရှည်တည်တံ့စေဖို့ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို အချိန်မီထိန်းသိမ်းကြစို့ ” ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ National Consultant (၁)ဦး ငှားရမ်းနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံ၊ ရာသီဥတုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီ (Norwegian Environment Agency-NEA) တို့ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်
မြေတိုင်းဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်၍ ကြေညာခြင်း
မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တတိယ (၃) လပတ်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူထားသည့် လုပ်ငန်သုံးပစ္စည်း (၄)မျိုးအနက် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း (၁)မျိုးအား ဌာနအရောက်တန်ဖိုး (D.D.P) (နေပြည်တော်)၊ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုခြင်း
လူမှုစီးပွားဘဝများ ဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက် ကျန်းမာသန့်ရှင်းသည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကောင်းမွန်သည့် ဂေဟစနစ်များ ပေးနိုင်ရေး ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်သူ့အတွက်စတုတ္ထ(၁)နှစ်တာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအစီအစဉ်
ရေရှည်တည်တံ့သည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် ဝင်ထည်စွာရပ်တည်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်သူ့အတွက်စတုတ္ထ(၁)နှစ်တာ